तपाईंको पोशाक – Islam Guide
Category: तपाईंको पोशाक
पोशाक मानिसहरूका लागि अल्लाहका वरदानहरूमध्ये एउटा वरदान हो । अल्लाहले भन्नुभएको छ– “हे आदमका सन्तान हो !, हामीले तिमीहरूका लागि पोशाक अवतरण गरेका छौं । जसले तिमीहरू आफ्ना अङ्गहरूलाई छोप्छौ र चिटिक्क पर्छौ । सुन, तक्वा (ईश्-भय) को पोशाक नै अति उत्तम पहिरन हो । यो अल्लाहको एउटा निशानी हो, ताकि उनीहरू शिक्षा ग्रहण गरुन् ।” (कुरआन : ७/२६)
अवैध पोशाकहरु- १) पारदर्शी पोशाक- मुस्लिमले आफ्ना अङ्गहरुलाई लुगाले छोप्नु अनिवार्य छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आदमका सन्तान हो ! हामीले तिमीहरुका लागि पोशाक अवतरण गरेका छौं। जसले तिमीहरु आफ्ना अङ्गहरुलाई छोप्दछौ।” (श्रोत- सूरह अल्-आ’राफ : ७/२६) पर्दाको सिमा- पुरुष र महिलाले आ-आफ्ना अङ्गहरुलाई कति सम्म छोप्नु पर्दछ भन्ने…
इस्लाममा पोशाक आस्थावानको पोशाक सुन्दर तथा सफा-सुग्घर हुनुपर्छ। विशेष गरी सलाह पढ्न र मानिसहरुसँग भेटघाट गर्नको लागि। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आदमका सन्तान हो ! हरेक सलाहको लागि राम्रो वस्त्र धारण गर।” (श्रोत- सूरह अल्-आ’राफ : ७/३१) अल्लाहले मानिसलाई राम्रो पोशाक लगाएर सुन्दर हुन प्रेरणा दिनु भएको छ, ’cause…